Umshini wokugaya/i-molino eduze nogu
Ortigueira, Galicia, i-Spain
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Blanca
I-Batán Mill isendaweni eluhlaza futhi enokuthula emfuleni iMera Valley, eduze nezindleko ezimangelengele zase-Atlantic esifundeni sase-Galicia eSpain. Ibuyiselwe ngomqondo wesimanje, ikunikeza ukuthula nenduduzo endaweni evelele ngemizuzu eyi-10 kuphela ukusuka ogwini. Samukela izilwane ezifuywayo eziziphethe kahle kodwa kuze kufike kokukodwa kwekotishi ngalinye.
Indlu iyisigayo esidala, esakhiwe ngamatshe, savuselelwa ngezinto zemvelo kanye nomqondo ovulekile wepulani ngo-2000. Igumbi lokuhlala linesitofu sezinkuni esinosofa ababili, itafula lokudlela kanye ne-TV. Indawo yokulala inombhede ophindwe kabili kanye negumbi lokugezela. Ikhishi lifakwe isiqandisi, umpheki kanye ne-microwave. Isigayo sinomunye umbhede ophindwe kabili olungele ingane eyodwa noma ezimbili. Sinikeza umbhede mahhala wezingane. Umshini wokuwasha wabiwa ne-Maquía Mill endaweni efanayo. Izinkuni zifakiwe enanini
Ngaphandle kunendawo yokosa inyama, umpheme kanye nefenisha yasengadini.
Indlu, efakwe esigodini esincane, izungezwe ingadi yasendle kanye nehlathi lemvelo. Ingadi ihlukaniswe umfula iFervenza futhi inamabhuloho amabili amancane okuwela kuwo. Eduze kwesigayo, ungathola indawo yomlingo nemvelo yokubhukuda eMfuleni iMera: iPozo de la Caldeira.
I-River Mera Valley ingeye-EU Natura 2000 Network futhi iyikhaya lezinhlobonhlobo zezilwane zasendle ezivikelwe.
Imizuzu embalwa ukusuka endaweni ongayithola: amawa adumile aseCapelada naseLoiba, i-Ortegal cap, amabhishi afana ne-Morouzos noma i-Fornos nezindawo zezivakashi ezifana ne-San Andrés de Teixido, i-Cedeira, i-Cariño, i-Ortigueira, i-O Barqueiro noma i-Estaca de Bares.
Hlola ezinye izinketho ezise- Ortigueira namaphethelo